CBD iyo daryeelka maqaarka | Mawduucyada CBD - CBD ammaan ma u tahay maqaarkaaga?
CBD & Daryeelka maqaarka
CBD iyo Daryeelka Maqaarka - CBD ammaan ma u tahay maqaarkaaga?
Wax soo saarka maqaarka ee CBD waa mid caan ah, suuquna waa uu sii weynaanayaa. Sida laga soo xigtay warbixin dhowaan la soo saaray, suuqa caalamiga ah ee maqaarka maqaarka ee CBD ayaa la filayaa inuu ku dhaco $ Doolarka 1.7 by 2025. Sarah Mirsini oo ka socota MĀSK ayaa ku soo biirtay si ay ugala hadlaan faa'iidooyinka daryeelka maqaarka ee CBD iyo kuwa kale ee cannabinoids.
LA XIDHIIDH BADAN: Xayeysiinta Sumcaddaada CBD
LA XIDHIIDH BADAN: Kardashian CBD Ilmo Qubeysku Wuxuu Calaamadeeyay Astaamo Biyo Heer Sare ah
Saliida CBD waxay noqotay mid caan ah oo amaan ah in la yiraahdo waxaad ka heli kartaa meel aad u badan meel kasta iyo qaab kasta ama bandhig kasta, waad ka fikiri kartaa. Hadda, waxay la wareegtay warshadaha daryeelka maqaarka sidoo kale. Maaskarada CBD, seeriyada, iyo chapsticks-ka, ilaa kiriimyada salka ku haya CBD, muraayadaha qorraxda iyo nadiifiyeyaasha, waxaa jira noocyo aan dhammaad lahayn oo alaab CBD ah oo laga iibsado dukaanka alaabada qurxinta ee meel kasta oo dalka ka mid ah.
Suuqa qurxinta ee caalamiga ah ee CBD waa qiimahoodu ka badan yahay $ 580 milyan, Mareykankuna joogitaankiisu aad buu u xoog badan yahay. Lafilayo in la garaaco $ Doolarka 1.7 by 2025, Isbedelka CBD goor dhow ma tagayo. Haddii aad ka fikireyso inaad ka mid noqoto kuwa ku xeel dheer daryeelka maqaarka ee ku saleysan CBD, halkan waxaa ku yaal wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato wax soosaarkaan iyo sida ay u caawin karto maqaarkaaga.
Waa maxay Saliida CBD?
Saliida CBD waa qayb dabiici ah oo laga soo qaatay Cannabis sativa noocyada xashiishadda warshadaha. Waxay leedahay saameyn badan oo togan oo ku saabsan jirka aadanaha; waxay leedahay tiro aad u tiro badan oo aan macquul ahayn in dhammaantood la wada magacaabo.
Cannabidiol ama CBD waa qaybta aan maandooriyaha lahayn ee marijuana ama dhirta hemp, oo loo soo saaro sida budo ah, oo badanaa loo cuno sidii saliid kor u qaadaysa codsigeeda iyo waxtarkeeda.
Waxaad u badan tahay inaad horay u maqashay CBD. Waxaa loo tixgeliyaa inay yareyso hurdo la'aanta iyo xanuunka daba dheeraada, iyo inay gacan ka geysato yareynta cudurrada isdifaaca, walaaca, iyo niyadjabka. Wax soo saarka CBD sidoo kale waa daaweyn dabiici ah oo caan ah oo ka dhan ah hurdo la'aanta waxayna ka caawineysaa kor u qaadista nidaamka difaaca jirka.
CBD ma laha maadada tetrahydrocannabinol (THC), taasoo la micno ah inay ka maqan tahay waxyaabaha maanka ku beddela maskaxda. Saliida CBD maaha wax la mid ah saliida abuurka hemp, inkasta oo ay tahay qayb kale oo weyn oo maqaarka ah, saliida CBD waxay hodan ku tahay cannabidiol.
Waa maxay sababta CBD loogu isticmaalo alaabada daryeelka maqaarka?
CBD-da ayaa caan ku ah astaamaha bogsiinta, faa'iidooyinka antioxidant-ka iyo anti-bararka ayaa si aad ah loo amaanay loona tixgeliyaa inay faa'iido u leeyihiin daaweynta walwalka maqaarka sida caabuq, qalalan, iyo finanka, maadaama ay ka caawineyso yareynta wax soo saarka sebum, maqaarka.
Maaddaama faa iidooyinkeeda ugu badan ee la faaleeyo, waxay yareyneysaa caabuqa, waxay xakameysaa wax soo saarka saliidda, waxayna dhexdhexaad ka dhigeysaa waxyeellada xagjirka ah ee bilaashka ah. Waxay noqon kartaa mid wax ku ool ah daaweynta cambaarta iyo cudurka psoriasis sidoo kale.
Waxaa lagula talinayaa kuwa qaba maqaarka oo bararsan, maqaarka oo jaban iyo sida noocyada maqaarka ee xasaasiga ah iyo kuwa qallalan, waxaana sidoo kale loo yaqaanaa inay ka caawiso maqaarka gabowga.
CBD ee finanka
Finanku waa xaalad bararsan. In kasta oo arrimo badani kiciyaan, haddana wax soo saar kasta oo aad maqaarkaaga u mariso oo badbaado leh oo yareeya bararka waxay u badan tahay inuu si muuqata u dhimayo jabitaanka.
Cilmi baaris ayaa muujisay in saliida CBD ay awood u leedahay inay yareyso soosaarka saliida badan, taas oo sidoo kale loo yaqaan inay keento finanka
Saliida CBD ee Laablaab
Saliida CBD waxay leedahay astaamo antioxidant, naxdin la'aan, wuxuu ka yimaadaa dhir. Antioxidant-yadaani waxay gacan ka geystaan ​​yareynta calaamadaha muuqda ee gabowga, duuduubka aka ama maqaarka oo caajis noqda.
Saliida CBD ee maqaarka xasaasiga ah
Saliida CBD waxaa lagu ogaadey inay leedahay waxyaabo xasilloon oo wax ku ool ah waxayna gacan ka geysan kartaa yareynta arrimaha la xiriira xasaasiga maqaarka, oo ay ku jiraan casaanka iyo falcelinta.
CBD ee Cambaarta
CBD waxay ka caawisaa la dagaallanka cuncunka iyo caabuqa ay keento cambaarta, oo ay weheliso xaaladaha maqaarka ee joogtada ah sida cudurka psoriasis iyo dermatitis
CBD loogu talagalay fuuq-celinta
Thanks to Waxyaabaha qoyaanka ah ee CBD, oo ay ku jiraan habka daryeelkaaga maqaarka ayaa kaa caawin kara la dagaallanka fuuq-baxa iyo qallalka.
Afeef, Waan fahamsanahay buunbuuninta maxaa yeelay CBD aad ayey u fiican tahay, laakiin ha aaminin wax kasta oo aad akhrido. Wali waa mid ka mid ah maaddooyinka badan ee maqaarkaaga ka caawiya inuu dareemo oo sifiican u muuqdo, farqiga ugu weyn ee u dhexeeya maaddooyinka kale iyo CBD waa: Saliidaha CBD runtii caan bay noqdeen
CBD miyuu ku jiraa alaabta daryeelka maqaarku badbaado maqaarkayga?
Waxyaabaha ku saleysan CBD ee daryeelkaaga maqaarka ah waa inay u qurux badan yihiin maqaarkaaga, haddii ay dhacdo inaad falcelin ka sameysid shey CBD ah, waxay u badan tahay inaysan ka imaanin CBD lafteeda, laakiin ay tahay qayb kale.
Markaad dooranaysid alaabadaada daryeelka maqaarka ee ay kujirto CBD, xusuusnow CBD inay sifiican ula shaqeyso waxyaabo lagu daro oo dejiya oo nafaqeeya caqabadda maqaarka, sida ceramides, hyaluronic acid, peptides, iyo niacinamides. Isku day inaad iska ilaaliso alaabada maqaarka ee CBD ee ay ku jiraan aalkolada, maxaa yeelay tani waxay la dagaallami kartaa saameynteeda waxtar leh waxayna sare u qaadi kartaa xaaladaha maqaarka ee caabuqa leh.
Wershadaha waxsoosaarka maqaarka ee CBD wali waa warshad aan sharciyeysneyn, sidaa darteed waa inaad ka taxaddartaa alaabada aad iibsato oo aad marwalba isticmaashaa noocyo daacad ka ah waxyaabaha ay ka kooban yihiin badeecadooda maadaama, marar badan, qaarkood ay noqon karaan kuwo aan daacad ka ahayn in CBD ay salka ku hayso waxyaabaha ku jira CBD dhab ah ama aan.
Ma yahay sharci inuu iibsado CBD wax soo saarka saliida dhamaan 50ka gobol?
CBD hadda waa sharci heer federaal. Wax soo saarka CBD waa la kori karaa oo lagu iibin karaa inta badan gobollada Mareykanka, taasna waxaa ku jira dhammaan daryeelka maqaarka iyo alaabada quruxda leh ee ay ku jiraan CBD, sidoo kale.
Sida laga soo xigtay Biilka Beeraha 2018, cannabinoids laga soo qaaday hemp warshadaha, oo ka kooban wax ka yar 0.3% THC, waa sharci, markaa waxaad si sharci ah uga iibsan kartaa alaabada maqaarka CDB meel kasta oo Mareykanka ka mid ah.
Dhibaatooyin noocee ah ayaa CBD ku yeelan kara alaabta daryeelka maqaarku?
Marka hore, kor uma kicin doontid. Hadda si dhab ah u hadlaya, CBD wax saameyn ah oo la yaqaan ma leh, laakiin khabiiro badan iyo dhakhaatiir badan ayaa isku raacay inaysan jirin cilmi baaris ku filan oo ku saabsan inta badan dhakhaatiirta maqaarka si ay ugu taliyaan alaabada CBD.
Wax soo saarka CBD maahan sheyga kaliya ee arintaas leh, maaddooyin badan oo xiddigleyaal ah ayaa la il daran cilmi-baaris la aan isla markaana wali waa badeecado miiska laga iibsado sidoo kale
Waxa laga Raadinayo Daryeelkaaga Maqaarka ee CBD
Waxaa jira waxyaabo badan oo ah daryeelka maqaarka ee CBD oo la heli karo, iyo haddii aad xiiseyneyso inaad hesho saliida ugu fiican ee CBD, halkan waxaa ku yaal tilmaamo ku saabsan doorashada sheyga ugu fiican ee CBD ee maqaarkaaga:
Hubso in liiska walaxda uu sheegayo cannabidiol. Saliida abuurka hemp ama soosaarka lama mid aha saliida CBD. Badeecadaha sheeganaya inay ku jiraan CBD, FDA waxay sheegtey in magaca ay tahay inuu ku yaal calaamadda maaddada ay tahay cannabidiol, marka sumadaha walxaha ay sheegaan waxyaabo sida saliida abuurka hemp-ee lagu hodmay, waxay u badan tahay inuusan lahayn wax saliid ah CBD
Tilmaame wanaagsan oo sheegaya in sheyga CBD-da uu sharci yahay ayaa ah marka sumadda ay liis garayso wadarta waxyaabaha ay ka kooban tahay cannabidiol ee ku jira milligram,
Raadi caddeyn dhinac saddexaad ah oo ku saabsan nadiif ahaanta iyo xaddiga la sheegay ee CBD si aad u hubiso inaad helayso waxa calaamaddu sheeganayso.
Ka fogow dhalooyinka, dhalooyinka cad, ama wax kasta oo xirxira oo sheyga u nuuraya iftiin badan ama hawo, waxay u keentaa inuu noqdo mid aan waxtar badan lahayn.